6 n'ime ndị enyi kachasị mma ụkwụ anọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
6 n'ime ndị enyi kachasị mma akwụkwọ anọ
Ha bụ ezigbo ndị enyi, ndị kwesiri ntụkwasị obi na ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Ha nọnyeere anyị kemgbe ụwa bụ ụwa. Ha na-eso anyị n'agwaetiti anyị na ọdachi, na njem anyị, ejije na ọysụ, n'ihe niile. N’enweghi nghọta, o nwere ndị na-anaghị amasị ha ma ọ bụ na-atụ ha egwu. Ma onye na-enwebeghị nkịta agaghị amata mmetụta ọ bụla ha na-akpali.
Lord Byron họọrọ ha karịa ndị mmadụ. O kwuru eziokwu. Ha nwere ike inye gị ihe niile naanị site n’ile gị anya. Ma ọ bụ jụọ gị. Ha ekwesighikwa ikwu okwu. Ha enweghi ihe diri nna ha ukwu, n’ime ihe oma na ihe ojoo, ka nma na ihe ojoo. Eziokwu na akụkọ ifo. Nkịta na-edekwa peeji na peeji nke ọhụụ na-enweghị atụ. Yabụ, na mmetụta na-enweghị atụ nke m na-ekwupụta maka ha, taa m dere banyere ụfọdụ n'ime nkịta ndị na-ede akwụkwọ. Ihe ncheta diri ndi gabigara ndu m.
Ọfọn ka anyị hụ. Aga m ebido ndị nna ochie mutt niile dị n’ụwa, ya bụ, anụ ọhịa wolf. Aga m ejedebe na adịghị ike.
3 Jumble na Tim
5 Bullseye (Ezigbo)
The alpha nwoke nke Seeonee ìgwè ehi, si Akwụkwọ ọhịanke Rudyard Kipling dere. Akela bụ onye na-eme mkpebi ịnabata Mowgli dị ka otu onye nke gị. Ọzọkwa bụ anụ ọhịa kachasị amamihe na obi ike. + Ọ na-ewute unu nke ukwuu na ọ nwụsịrị n’agha Jehova Jaros Nkịta.
M na-atụ egwu na ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ na-eso ụzọ Egwuregwu nke ocheeze akpụkpọ ahụ m dị ndụ ma ọ bụrụ na m hapụ ya. Yabụ, n'ezie. Enweghị ike ịkpọ aha White Wolf nke ama ama Jon Snow. Onye nwere ọgụgụ isi na aghụghọ, mmụọ nwere mmụọ mmetụ ahụ nke jupụtara na saga nke George RR Martin.
Jumble na Tim
Jumble na Tim bụ nkịta dị na nwata, tinyere nke anyị nwere nke anụ ahụ́ na ọbara. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ndị dị na mkpuchi ahụ, ị ​​ga-abụrịrị ọgbọ m. Na ndị ọzọ. Mana enweghi afọ ma ọ bụ mbipụta ọhụụ nke gbanwere Guillermo Brown ee Ise. Ọ bụghị ndị enyi ya ụkwụ anọ anaghị ekewa. Na-adịghị ike ma na-achọkarị maka njem, Jumble na Tim bụ n'ezie nkịta. na anyị niile chọrọ inwe ụmụ.
Anyị niile wee Ndị a chụpụrụ achụpụ otu mgbe anyi nile wee ga - emeghe ihe omimi Jorge na ụmụ nwanne nne ya. Ma anyị makwa na anyị nwere anya na-eche nche ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị nke Jumble na Tim. Ha ga-eche anyị nche ka ihe ọjọọ anyị ghara ịmata anyị, ma ọ bụ onye ajọ omume nọ n'ọrụ nke na-achụ anyị dịka anyị na-edozi ihe omimi ahụ.
Gaghị agbaghara ndị echefughi protagonist nke Oku nke ohia, na Jack London. Otu n'ime ihe odide canine kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ. Nke gi bu otu n’ime mma ihe atụ nke ụkpụrụ nkịta niile dị adị na na London maara otú kọwaa na a masterful ụzọ. Onye ọ bụla nke na-enweghị mmasị na nkịta kwesịrị izute Buck.
Maka njedebe, ihe ekwuru, adịghị ike. Ikekwe maka ịbụ ndị kachasị mgbochi, emegburu na onye emeriri. Ndị ahụ bụ ihe odide m kachasị amasị m. Achọrọ m aha mbụ ya na Bekee, na-atọ ụtọ karị. N'ebe ahụ ka ọ dị na onye nwe ya na isi ihe eji eme ya.
De Oliver, nke egwu 1968. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ nsụgharị ihe nkiri nke Oliver gbagọrọ agbagọ, kpochapụwo dickens. Na, n'etiti ndị ọzọ, ọ pụtara nnukwu Oliver Reed, onye amụrụ n'ụzọ ziri ezi iji gosipụta agwa ndị na-emekpa ahụ na ndị na-emekpa ahụ. Ya mere, ọ kpara nke ọma obi ọjọọ na obi ọjọọ Bill Sikes, otu n’ime ndị ọkacha mmasị m n’ọrụ Dickens niile.
Sikes na-esonyere mgbe niile Bullseye, ehi terrier acha ọcha na ntụpọ na anya aka nri. Bullseye bụ ihe atụ zuru oke na nkịta nwere ike ịdị ka nna ha ukwu kachasị mma na nke kachasị njọ. Ọ kpọkwara asị dị ka Sikes, ma dị ka nkịta niile, nke iguzosi ike n'ihe niile n’agbanyeghi ihe ojoo nna ya ukwu na eme ya. Nke mere na n'ikpeazụ ọ nwụrụ ịnwa ịzọpụta ndụ ya. Na ịgụ ma ọ bụ ikiri ọnọdụ ahụ ị na-eche mgbe niile na onye kwesịrị ọnwụ kacha njọ bụ Sikes, n'ihi na Achọrọ m ịchekwa Bullseye.
Agbanyeghị, Enwere ọtụtụ ndị ọzọ, mana m hapuru ya ebe a. Na-agbakwunye ndị na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » 6 n'ime ndị enyi kachasị mma akwụkwọ anọ
Obere ọ pleụ ndị ahụ naanị ndị ode akwụkwọ nwere
Ọbá akwụkwọ dijitalụ nke anyị nwere ike ịkpọ maka n'efu